FAQs - Yantai Tonghe Precision Industry Co., Ltd.
Q: Ukuphakamisa ngokukhawuleza ngequbuliso kuphulukana namandla ngexesha lokusetyenziswa, ngaba izixhobo ziya kuwa kwangoko?
A: Ngaba ayiyi. Emva koxinzelelo lwamandla ngesiquphe, izixhobo ziya kugcina umbane ngokuzenzekelayo kwaye zigcine urhulumente ngexesha lokumka kwamandla, kunganyuki okanye kungawi. Iyunithi yamandla ixhotyiswe nge-valve yokuhambisa uxinzelelo. Emva kokuncitshiswa koxinzelelo ngesandla, izixhobo ziya kuwa kancinci.
Pls bhekisa kwividiyo.
Q: Ngaba ukuphakamisa okuKhawulezayo ukuphakamisa kuzinzile?
A: Ukuzinza kokuPhakamisa ngokukhawuleza kulungile kakhulu. Izixhobo zidlulisile isatifikethi se-CE, kunye novavanyo lomthwalo omkhethe kumacala omane ngaphambili, ngasemva, ngasekhohlo nasekunene, zonke ziyahlangabezana nomgangatho we-CE.
Q: Kukuphi ukuphakama kokuphakamisa ukuKhawulezisa okuKhawulezayo? Emva kokuba isithuthi siphakamisiwe, ngaba sikhona isithuba esaneleyo emazantsi somsebenzi wokulungisa isithuthi?
A: Ukuphakamisa ngokukhawuleza sisakhiwo esahluliweyo. Emva kokuba isithuthi siphakamisiwe, indawo engezantsi ivule ngokupheleleyo. Owona mgama ubuncinci phakathi kwesisu semoto kunye nomhlaba yi-472mm, kwaye umgama emva kokusebenzisa iadaptha yokuphakama yi-639mm. Ixhotywe ngebhodi eleleyo ukuze abasebenzi bakwazi ukwenza imisebenzi yolondolozo phantsi kwesithuthi.
Umbuzo: Ngaba i-Inground Lift kulula ukuyigcina?
A: Inground Phakamisa Kulula kakhulu ukuba ulondolozo. Inkqubo yolawulo ikwikhabhathi yolawulo yombane emhlabeni, kwaye inokulungiswa ngokuvula ucango lwekhabhathi. Injini engaphantsi komhlaba iyinxalenye yoomatshini, kwaye amathuba okusilela aphantsi. Xa iringi yokutywina kwisilinda yeoyile kufuneka itshintshwe ngenxa yokuguga kwendalo (ngesiqhelo malunga neminyaka emi-5), ungasusa ingalo yenkxaso, uvule ikhava ephezulu yekholamu yokuphakamisa, ukhuphe isilinda yeoyile, kwaye ubeke iringi yokutywina .
Umbuzo: Ndimele ndenze ntoni ukuba i-Inground Lift ayisebenzi emva kokuba inikwe amandla?
A: Ngokubanzi, kubangelwa zezi zizathu zilandelayo, nceda ujonge kwaye uziphelise iziphene nganye nganye.
1.Umatshini oyintloko wokutshintsha amandla awuvulwanga, Jika iswitshi esiphambili kwindawo "evulekileyo".
Iqhosha 2.Power iyunithi yokusebenza yonakele ， Khangela kwaye buyisela iqhosha.
Amandla apheleleyo e-3.User anqanyuliwe, Qhagamshela unikezelo lwamandla ewonke omsebenzisi.
Umbuzo: Ndimele ndenze ntoni ukuba i-Iground Lift inokuphakanyiswa kodwa ingathobi?
Uxinzelelo lomoya olwaneleyo, isitshixo soomatshini asivuli, Jonga uxinzelelo lwemveliso yesiguquli somoya, ekufuneka sibe ngaphezulu kwe-0.6Ma, Jonga isekethe yomoya ukuba ayikho na intanda, buyisela umbhobho womoya okanye isinxibelelanisi somoya.
2.Ivalve yegesi ingena emanzini, ibangela ukonakala kwekhoyili kwaye indlela yegesi ayinakunxibelelana.Ukutshintshwa kwekhoyili yomoya wevalve ukuqinisekisa ukuba isahluli samanzi seoyile sempompo yomoya ikwimeko yokusebenza eqhelekileyo.
3.Ukuvula isilinda umonakalo, Ukutshintsha isilinda yokuvula.
I-coil ye-valve yokunyanzeliswa koxinzelelo lwe-elektroniki yonakele, Faka i-coil ye-valve ye-valve yokunceda.
Iqhosha 5.Down yonakele, Buyisela ezantsi iqhosha.
6.Power line unit unit, Khangela ulungise umgca.
Iselfowni ePost Post yokuPhakamisa imoto, Ukuphakanyiswa kweMoto eNye ePhathekayo, Isiphatho seHydraulic Scissor seMoto, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa okungaphakathi, Isilinda esibambeleyo esinye, Iposi ephindwe kabini yokuPhakamisa phantsi komhlaba,